Ny namahanan’ny Tompo olona dimy arivo – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 mars 8, 2013 mai 31, 2013 Laisser un commentaire sur Ny namahanan’ny Tompo olona dimy arivo
« Misy zazalahy aty manana mofo vary hordea dimy sy hazan-drano madinika
roa, fa ho ampy inona moa izany amin’izao olona betsaka izao! Fa hoy Jesosy: Asaovy mipetraka ny olona. Ary nisy ahitra be teo. Ka dia nipetraka ny lehilahy, tokony ho dimy arivo ny isany. Dia nandray ny mofo Jesosy; ary rehefa nisaotra, dia nizara izany tamin’izay nipetraka hihinana Izy; ary ny hazandrano koa araka izay nilainy. Ary rehefa voky ny olona, dia hoy Izy tamin’ny mpianany: Angony ny sisa tsy lany, mba tsy hisy ho very. Dia nangoniny, ka nahafeno harona roa ambin’ny folo ny sombintsombin’ny mofo vary hordea dimy, izay ambiny tsy lanin’ny nihinana. » (Jaona 6:9-13)
Efa nanasitrana marary Jesosy ka dia tamana ny olona, ary nanaraka Azy mba te-hahita fahagagana indray izy ka nanaraka an’i Jesosy. Ny tao amin’ny fikasan’i Jesosy eto indray, dia ny hamahana ireto olona maro be. Hoy Izy tamin’i Filipo: Aiza no hividianantsika mofo hohanin’ireo? Raha amin’ny fianana an-davan’andro tokoa dia sarotra ny ahitana mpivarotra mofo marobe indray maka ho ampy an’ireto olona tsy omby dimy arivo ireto, ny fotoana koa tsy nampoizina hoe mba hanao komandy mialoha. Voalazan’ny Soratra Masina fa efa fantatry ny Tompo mialoha ny ataony fa te hizaha toetra ny mpianatra Izy ka nanontany azy. Izany hoe efa nisy fikasana mialoha tao amin’ny Tompo hamahana ireto olona nanaraka Azy ireto. Ny mpianatra iray niteny tamin’ny Tompo hoe: Misy zazalahy aty manana mofo vary hordea dimy sy hazan-drano madinika roa. Fa ho ampy inona moa izany amin’izao olona betsaka izao. Amin’ny maha mpianatra ny mpianatra dia nankatoa an’i Jesosy izy: misy zazalahy aty mananamofo dimy sy hazandrano roa. Na dia izany aza dia eo ihany ny fanahiana: ho ampy inona moa izany amin’ireto olona marobe ireto? Hita eto ihany ny maha olona azy. Ny fihetsik’i Jesosy anefa dia tsy nahitana fanahiana na dia kely akory aza. Hoy Jesosy: asaovy mipetraka ny olona. Tsy nametraka ahiahy velively Izy. Feno fahatokisana ny Tompo: Dia nandray ny mofo Jesosy. Ny fandraisana ny mofo dia efa mariky ny finoana. Efa fantatr’i Jesosy fa mofo dimy ny eo ampelatanany. Raha ho zaraina folo ny mofo iray, dia ho olona dimampolo no hahazo anjara, dia mbola aiza no hamahanana ny dimampolo sy sivinjato sy efatrarivo hafa? Tsy nalehan’ny sain’ny Tompo anefa izany fa tonga dia nisaotra Izy rehefa nandray ny mofo.
Tsy nametra-panontaniana Jesosy , fa nisaotra. Mariky ny fahatokiana ny fisaorana. Iza moa no nisaoran’i Jesosy eto? Nisaotra an’Andriamanitra Izy. Ny fisaorana dia fanambarana fankasitrahana. Tokony ho fianarana ho antsika
izao ataon’i Jesosy izao: mila mahay misaotra an’Andriamanitra isika na dia mbola tsy nahazo akory ny zavatra nangatahantsika aza isika, mba ho mariky ny fahatokiantsika an’Andriamanitra. Dia nizara izany tamin’izay nipetraka hihinana Izy. Rehefa tonga teo amin’ny mofo fahadimy dia mety ho lasa saina ihany ny mpianatra: ary toa tsy mety lany izy izany. Tsy nisy nametra-panontaniana mandra-pahavita ny fizarana. Rehefa vita ny fizarana hatramin’ny hazandrano, dia voalaza fa rehefa voky ny olona dia niteny Jesosy nanao hoe: angony ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very.
Tsy nihinankinana fotsiny ny olona fa tena nihinana tokoa ary voky. Ny nahagaga dia mbola nisy ambiny aza. Dia nangoniny , ka nahafeno harona roa ambin’ny folo ny sombintsombin’ny mofo. Tena Andriamanitra tokoa Jesosy. Raha izao fahagagana nataon’ny Tompo teto izao dia efa zava-niseho koa tao amin’ny tantara ao amin’ny I Mpanjaka 17: 12-13 ny amin’ny Elia sy ilay vehivavy mpitondratena tsy nanan-kohanina afa-tsy koba eran’ny tanana ila sy diloilo kely foana. Izany anefa no nahavelona an’i Elia sy ilay vehivavy mpitondrantena sy ny ao an-tranony naharitra elaela. Tena Andriamanitra tokoa Jesosy, ka hainy ny manova ny rano ho tonga divay, hainy ny manasitrana ny marary rehetra izay nentina teo aminy, hainy ny nanangana ny maty, ary izao nasehony izao koa ny fahefany afaka mamoky olona dimy arivo tamin’ny mofo hordea dimy sy hazan-drano roa.
Te hampiasa anao ny Tompo: eto dia zazalahy nanana mofo dimy sy hazandrano roa no nampiasain’ny Tompo. Azony natao tokoa ny tonga dia manome mofo mivantana avy amin’ny tsy misy, ary mety azony alatsaka avy any an-danitra izany tahaka ny mana tany an’efitra, fa eto Jesosy dia nampiasa ireto mofo sy azan-drano avy amin’ity zazalahy ity ireto. Mba mety ho fitaovana azon’ny Tompo ampiasaina tahaka izao koa ve ianao, ka na dia kely aza ny eo ampelatananao, dia hain’ny Tompo Jesosy ny mampitombo izany ho tonga voninahitr’Andriamanitra lehibe eo amin’ny fiaraha-monina mihitsy. Mino ve hianao fa na kely aza ny eo ampelatananao, ary tsy misy aza dia hain’ny Tompo ny manao zavatra tsy takatry ny saina amin’ny alalan’izany?
Jesosy moa dia nanambara ny tenany ho Mofon’Andriamanitra dia Ilay nidina
avy any an-danitra ka manome fiainana ho an’izao tontolo izao. Izy no mofon’aina; izay manatona Azy tsy mba ho noana, ary izay mino Azy tsy mba hangetaheta intsony. Ny eto amin’ity teksta ity dia ny mofo hita maso azo tsapain-tanana no nomeny ny olona dimy arivo. Nefa araka ny lazainy koa hoe izay manatona Azy tsy mba ho noana. Ny famokisana ny fanahintsika no tiany holazaina amin’izany. Jesosy afaka manome antsika ny fiainana mandrakizay ka tsy hatakalo zavatra hafa intsony izany fiainana izany.
Manana natiora roa Jesosy: tena olona Izy satria natera-behivavy ary niaritra izay fanaintainana nihatra tamin’ny olona (hanoanana, alahelo, hirifiry, …). Nefa tena Andriamanitra koa Izy. Inona no tombon’ny mino Azy? Afaka mamonjy izay alaim-panahy koa Izy satria efa nalaim-panahy tamin’ny zavtra rehetra. Nitondra ny fahotantsika Izy na dia tsy nanota aza. Nanaiky Jesosy ho fialofako sy ho fialofanao raha misy fiampangan’i Satana antsika eo amin’Andriamanitra ka Izy no Mpisolo-vava antsika hiaro antsika amin’ny fanamelohana antsika noho ny heloka vitantsika na dia heloka tsy nataon’Izy Jesosy akory aza izany, toy ilay zanak’ondry tsy misy kilema novonoina hitondra ny fahotan’izay nanota, Jesosy novonoina indray mandeha hitondra ny heloky ny rehetra, mba ahazoan’izay manatona Azy Fiainana.
Raha mandinitena ary isika ankehitriny, raha nisy ny hanoanana, nisy ny tsy fahampiana, nisy ny fahoriana, nisy ny famoizam-po… , dia aoka hitodika amin’Andriamanitra isika, hitodika amin’ny Tompo, fa tsy hitodika any amin’ny olon-kafa na hitodika any amin-javatra hafa.
Raha mahatsiaro-tena ary ianao ho noana, mety ao anatin’ny aretina mafy, mety ianjadian’ny olona mampijaly anao mafy, mety itambesaran’ny fahoriana lehibe, manatona ny Tompo! Hoy ny Salamo 84: 3: Eny, ny tsikirity
mahita trano, ary ny sidintsidina mahita akany ho azy, dia ny alitaranao,
Jehovah Tompon’ny maro ô, Mpanjakako sy Andriamanitro! Manana sanda kokoa noho ny tsikirity na ny sidintsidina Hianao. Raha manatona Azy ianao dia tsy ho diso anjara Aminy.
Publié parfilazantsaramada mars 8, 2013 mai 31, 2013 Publié dansUncategorized